သမ္မတအိုဘားမားနောက် Vista လား | Martech Zone
သမ္မတအိုဘားမားနောက် Vista လား
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 3, 2008 ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 2, 2015 Douglas Karr
ဒါဟာ ၂၀၀၈ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ညဖြစ်တယ်။ မနက်ဖြန်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုငါစိတ်မ ၀ င်စားသေးဘူး။ ဘားရက်အိုဘားမားသည် Vista ၏ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
ပြောင်းလဲမှုအတွက် Hyped ။
မီဒီယာနှင့်ပညာရှင်များက၎င်းကိုအိုဘားမားအတွက်အနိုင်ယူပြီးဖြစ်သည်။ လအနည်းငယ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာအမေရိကကလိုချင်နေမလား အဆင့်နှိမ့်, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး မှပြောင်းလဲရန်အခွင့်အလမ်း မက်။ (မက်ကိန်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ) ။
Tags: 2008 ရွေးကောက်ပွဲဘားရက်အိုဘားမားရှေးကောကျပှဲအိုဘားမား
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 37
ဒီပို့စ်တင် TX4။
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 54
စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မူဝါဒကိုဖောက်ဖျက်ပြီးနောက်ဤပို့စ်တွင်ပါရှိသောထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းရမည်။
Nick Turner ပါ
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 56
OpenMinded မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ သငျသညျသဘောမတူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူ့ကိုအခွံမာသီးကိုခေါ်အမှန်တကယ်အဝိဇ္ဇာ၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုသူ၏တုံ့ပြန်မှုကိုဖျက်ပစ်ကိုမြင်တော်မူ၏ဒါပေမယ့်တရားမျှတခဲ့သည်။ ဒီမှာနှစ်နှစ်ကြာဒေါက်ဂလပ်စ်စာဖတ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ မင်းအကြောင်းနဲ့မင်းရဲ့မှတ်ချက်တွေကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ဖို့ဘယ်လိုရွေးချယ်ပုံအကြောင်းကျွန်တော်အနည်းငယ်လေ့လာခဲ့တယ်။ သင်နှင့်သင်၏သဘောသဘာဝကိုသဘောတူပြီးအခြားသူများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သင်မလိုလားသောအရာများကိုဖယ်ရှားပြီးရလဒ်အဖြစ်သူတို့ကိုဖော်ပြရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။
ခင်ဗျားသိပ်မကောင်းတဲ့အိမ်ရှင်ဒေါက်ဂလပ်မဟုတ်ဘူး။ မင်းရဲ့မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုနောင်အနာဂတ်မှာစာဖတ်နေလိမ့်မယ်။ တောင်းပန်ပါတယ်
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 24
တကယ်တော့ OpenMindedNut ရဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူဘူး။ တကယ်တော့သူကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်ခံရမှု မှလွဲ၍ သူတို့အားလုံးနဲ့သဘောတူလိုက်တာကဒီဟာက 'နုတဲ့' ရာထူးဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်သူ့ကို Nut Nut လို့မခေါ်ခဲ့ပါ။ သူကသူ့ကိုယ်သူ Nut ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ကိုသူ့ရဲ့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုကမှတ်ချက်တွေကိုချလိုက်တယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်ချက်ရေးသည့်မူဝါဒကိုဖတ်ပါ၊
မင်းကိုစာဖတ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးဖို့မုန်းလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လူတွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပါဝင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ ငါအချို့တာဝန်ယူပါ။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 38
ငါဒေါက်ဂလပ်ကိုမဝယ်ပါဘူး။ အသုံးပြုသူအမည်အပေါ် မူတည်၍ သင်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ “ Nut” သည်အရာများစွာကိုဆိုလိုနိုင်သည်။ ဒါဟာဆိုလိုတာကသင်ထင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီအချက်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါသင်ဒီမှာမကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားကျူးလွန်မိတယ်။ သူ့ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာမင်းရဲ့ဘလော့ဂ်တင်ပို့ချက်ထက်ပိုများတယ်။
မနေ့ကစက်ရုံမှာ ၃၂ နှစ်တာအဖေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဤတိုင်းပြည်တွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုမပေး, အခြေအနေကဲ့ရဲ့နှင့်တိုင်ကြားမည့်အစား? သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကောင်လေးငါတို့ကဲ့သို့ကျန်။ တိုင်ကြားချက်သည်ဤတိုင်းပြည်တွင်ရောဂါဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အိုဘားမားဟာဒီတိုင်းပြည်အတွက်မကောင်းဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်၊ မင်းဒီ post ကိုစခဲ့တယ်။ သင်၏စာဖတ်သူအများစုသည်သင်၏ထင်မြင်ချက်နှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး ၏ထင်မြင်ချက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတူဖတ်ရှုကြသည်။
လူတစ် ဦး ကသင်၏အခြေအနေသည်လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်နုသေးသည်ဟုခံစားခဲ့ရပြီး“ လာမည့်အရာများ” ကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းသို့မဟုတ်ညည်းညူခြင်းသည်ရင့်ကျက်ခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဖတ်နိုင်သည်။
အခုအချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်လုံးတွေလုပ်ဖို့အချိန်ကောင်းမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီမှာလူတွေကမင်းအလုပ်ပြုတ်ပြီးမင်းသိတဲ့အိမ်တွေဆုံးရှုံးနေကြပြီလား။ သင်၏ဘဝ၌တည်မြဲပြီးတည်ငြိမ်နေမည်ဖြစ်သော်လည်းလွန်ခဲ့သော ၂ လအတွင်းစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားနေရသောကမ္ဘာကြီးမဟုတ်လျှင်အခြားတိုင်းပြည်၏ ၆၀% ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 48
သင်သံသယ၏အကျိုးကျေးဇူးကို OpenMindedNut ပေးသည်။ ငါ့ကိုငါအလားတူအကျိုးခံစားခွင့်ပေးစေချင်ပါတယ် မင်းကိုငါနဲ့အတူနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါဒီ post မှာဒီပန်းချီကားပုံနဲ့မတူတဲ့အမြင်ကိုမင်းတွေ့လိမ့်မယ်သေချာတယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာလူတွေကရက်စက်ကြမ်းတမ်းတဲ့၊ ဒေါသထွက်နေတဲ့၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမခံယူဘဲတစ်ယောက်ယောက်ကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မေးခွန်းထုတ်လို့မရတဲ့ဒီနေ့အရမ်းဝမ်းနည်းဖွယ်နေ့ပါပဲ။ အမှန်ပင်အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 59
wow ငါ OpenMinded ကိုမင်းရဲ့တုန့်ပြန်မှုကိုဖတ်ပြလိုက်တယ်။ ဒါကမင်းသူ့ကိုပေးတဲ့အနိမ့်ဆုံးတုန့်ပြန်မှုပဲ။ သူ့မှတ်ချက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာကပိုဆိုးတယ်။ ငါတော့ဘူးသင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်ဖတ်နေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 07
Trisha (အလေးအနက်ထား) ကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီမှတ်ချက်ချည်မျှင်ကိုဘယ်ဘက်ခြမ်းသို့သို့မဟုတ်အင်တာနက်၏ကျန်အစိတ်အပိုင်းများသို့ပြောင်းလဲစေသည့်ဘက်လိုက်သောဘက်လိုက်မှုဖြစ်ရန်မလိုချင်ပါ။
OpenMindedNut ၏အမည်ပြောင်မှာ 'OpenMinded' နှင့် 'Nut' ဖြစ်သည်။ ငါသူအမည်ပြောင်မလုပ်ခဲ့ ငါရိုးရှင်းစွာကြောင်းသူ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူမ 'နု' 'အဖြစ် post ကိုအပေါ်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုမှတ်ချက်မူဝါဒကိုချိုးဖောက်။ သူ့ရဲ့နောက်တိုက်ခိုက်မှုကပိုပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်ခဲ့သည်။
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 18
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 38
ခင်ဗျားတို့ဟာရီပတ်ဘလီကန်တွေမဟုတ်၊ ဒီမိုကရေစီမဆန်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကအမြဲတမ်းအတည်ပြုပေးခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲသင်ဒီမိုကရေစီနှင့်ပတ်သက်။ ရယ်စရာနှိုင်းယှဉ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အခုသူတို့က“ အထိခိုက်မခံတဲ့” ပါတီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့တုန့်ပြန်မှုမှာသူတို့သိနေပြီဆိုတာသင်သိသင့်တယ်။ ရိုးရာ - ကစားစရာဟာသအနည်းငယ်တန်ဖိုးထားရှိသည်!
3:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 22
ထို့အပြင်ငါ Vista ကနေ XP သို့ပြောင်းမှုကိုငါ့2ဆင့်ပဲ upgrade အဖြစ်ယူဆသည်လိမ့်မည်ဟုငါငြင်းခုန်လိမ့်မယ် 🙂
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 25
ငါ OpenMindedNut နေဖြင့်ထိုမှတ်ချက်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ငါကအကောင်းတစ် post ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ဒေါက်ဂလပ်စ်, ဤအချိန်သည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုပြက်ရယ်ပြုရန်အချိန်မဟုတ်ပါ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်သူများနှင့်နိုင်ငံတကာမှငွေရေးကြေးရေးအရထိခိုက်မှုများ၊ အလုပ်များ၊
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, ငါကသူ့အကဲဖြတ်အတွက်ဘာမှမတွေ့ရှိခဲ့ဘူး။ သူ၌အချို့သောခိုင်လုံသောအချက်များရှိသည်။ မင်းဘာကြောင့်ဖယ်ထုတ်တာလဲ သူ၏တိုက်ခိုက်မှုမှာသူ့ကိုသင်၏အခွံမာသီးဟုခေါ်သောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကမင်းဆီကမကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲ။
သူထင်မြင်ချက်တွင်အချို့သောအတွေးများကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တုတ်တစ်ချောင်းမဟုတ်ကြောင်းမြင်သောအခါအဘယ်ကြောင့်သူ့ကိုထုတ်ပစ်ခဲ့သနည်း။ ဒေါက်ဂလပ်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်၊ ငါဒီမှာမင်းသဘောမတူဘူး သားကောင်၏အခန်းကဏ္ကိုကစားခြင်းနှင့်“ ညစ်ညမ်းသော” ဟုခေါ်ခြင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုဖုံးကွယ်ရန်ကြိုးစားခြင်း၏လက္ခဏာဖြစ်သည်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 36
သင်အလွန်ခိုင်လုံသောအချက်များပါစေ။ OpenMindedNut (သူ၏နာမ၌ Nut WAS) ကိုဆင်ဆာလုပ်ရန်မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှကျွန်ုပ်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါဒီမှာရိုသေလေးစားမှုပွဲစားတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်သင်ပတ်ပတ်လည်ကပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြဘူး။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 59
ငါမှတ်ချက်လဲလှယ်ကိုမြင်လျှင် ... post ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကအကြောင်းဘာမကောင်းတဲ့ခဲ့သလဲ သငျသညျလွန်းအထိခိုက်မခံဖြစ်ခြင်းရှိပါသလား
၎င်း၏လူသိများသောဘလော့ဂ်လောကတွင်သင်သည်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုထားသောအခါသင်နှင့်သဘောမတူသောတုံ့ပြန်မှုများကိုမျှော်လင့်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်အလွန်ညံ့ဖျင်းပြီးသင်၌ဝှက်ရန်တစ်ခုခုရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဝေဖန်မှုကိုမခံယူနိုင်ပါက (ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစပြောရရင်) သင်ရေးသားခြင်းမပြုသင့်ပါ။ သင်၏စာဖတ်သူများကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သင်၏ sensitivity သည်သင်နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာဖော်ပြထားသည်။
OpenMindedNut အကြောင်းရေးသားခဲ့သမျှအားလုံးသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ ဘုရှ်၏အတည်ပြုချက်သည်သမိုင်းတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကို Google လုပ်သင့်တယ်။ နိုင်ငံအများစုကကောင်လေးကိုသဘောမကျဘူး။ သူ့ကိုထွက်ဖို့မစောင့်နိုင်ဘူး။ အပြောင်းအလဲကိုမြင်ချင်တယ်။ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအထိမြင့်တက်နေသည်။ သင်ဂရုမစိုက်ဘူးလား ဒါမှမဟုတ်အရာဝတ္ထုအပြောင်းအလဲတွေအတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့ကျောက်တုံးအောက်မှာမင်းရဲ့ခေါင်းကိုကွင်းပိတ်ထားသလား။
ကျွန်တော်ရီပတ်ဘလီကန်ပါ ထိုအခါငါဒုတိယသက်တမ်းအဘို့အဘုရ်ှမဲပေးအမှားကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အိုဘားမားကိုအခွင့်အလမ်းပေးခြင်းနှင့်သူ့ကိုသင်၏ရာထူးမှနှုတ်ခြင်းမပြုခြင်းသည် UNAMERICAN ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်း OpenMindedNut“ နု” ဟူသောစကားလုံးကိုအဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုခဲ့သနည်း။ မင်း 'nut' ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေမှားမှားယွင်းတဲ့စကားလုံးကိုလည်းယူခဲ့တယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတစ်ယောက်ယောက်ကိုအခွံမာသီးလို့ခေါ်ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကသူတို့သိတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တယ်။
မျက်နှာကိုကယ်တင်ရန်သင်သည်ထိုမှတ်ချက်ကို ထပ်မံ၍ လူတို့အားဖတ်စေသင့်သည်။ ၎င်း၏အမှန်တရားနှင့်တစ်ခါတစ်ရံအမှန်တရားနာကျင်။ ငါတို့အားလုံးကအမေရိကန်တွေပါ၊ ငါတို့လိုဒါမျိုးစလုပ်သင့်သလား။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 09
Yikes! နိုင်ငံရေးအကြောင်းရယ်စရာအချိန်မဟုတ်လား။ SNL ထုတ်လွှင့်သည့်အခါတိုင်း TV ကိုသင်ပိတ်ထားသလား။ Doug သည်မနက်ဖြန်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏မသေချာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထင်မြင်ချက်ကိုမျှဝေလိုက်သည်။ OpenMinded ဘာပြောသလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Doug ကိုကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ သူရဲ့ထင်မြင်ချက်သဘောထားကွဲလွဲမှုကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်ချက်ကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်တာကိုသူစိတ်ကူးမရပါဘူး။ အဆိုပါမှတ်ချက်မူဝါဒက posted နှင့် Doug ကပြဌာန်းထားသည်။ Doug နှင့်သင်သဘောမတူပါက၊ စာမဖတ်ပါနှင့်။ အခြားတစ်နေရာရာသို့သွားပါ၊ သို့သော်သူ့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှုတ်ချလိုက်ခြင်းကမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ သင်နှင့်သဘောမတူသူတစ် ဦး နှင့်သင်၏ထိတွေ့မှုအားဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရန်သင်ဆုံးဖြတ်နေသည်။ ကျနော့်အမြင်ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာလူတိုင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကသူတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ (သို့) တခြားသူတွေကသူတို့ကိုစင်မြင့်တစ်ခုပေးရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ Doug ၏ post ကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောကျမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လူတွေကအနားယူပြီးပေါ့ပေါ့တန်တန်နေဖို့လိုတယ်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 14
ဒီဟာကိုငါရအောင်လုပ်ပါရစေ။ ငါဟာနုပျိုနေပြီ၊ ဝနေပြီ။ အစားအစာကိုစားဖို့လိုတယ်၊ စကားမပြောနိုင်၊ အားနည်းနေတယ်၊ ​​ဘုရ်ှချစ်မြတ်နိုးသူ၊ အိုဘားမားကိုမုန်းသူ၊ UNAMERICAN၊ လူတွေကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်း၊ သူတို့အလုပ်ပြုတ်သွားတယ်၊ ငါကနိုင်ငံရေးကနေဟာသတစ်ခုလုပ်နေတယ်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 34
သင်စာဖတ်သူများသည် Douglass လုပ်ခဲ့သည့်အရာကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခဲ့သည်ကိုသင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ post ကိုမှာအားလုံးမကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဲဒါကိုသဘောမတူလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့မကောင်းဘူး။ သင်အထိခိုက်မခံဖို့ wayyyyyyyyy များမှာ!
ဤသည်နောက်ဆုံးပေါ် post ကိုတော်တော်လေးသနားစရာဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင်ရယ်စရာဝေးမိမိကိုယ်ကိုကနေအပြစ်ကိုလွှဲပြောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြကဲ့သို့သောဖတ် စိတ်မကောင်းပေမယ့်ဒီတော်တော်ခြေဆွံ့သော!
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 03
သင်လုံးဝမှန်ပါသည် ဘုရားရေ! ဤမှတ်ချက်များကိုဤစာမျက်နှာတွင်ကြည့်ပါ - ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ပေးနိုင်ရန်၎င်းအားသေချာစွာစီစစ်ခဲ့သည်။ ငါသဘောမတူဘူးထင်မြင်ချက်အားလုံးကိုကျိန်းသေဖယ်ရှားပစ်ပါတယ်။
Tim S သည်
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 18
စောင့်ပါ - စတိုင်နှင့်ကျက်သရေရှိသည့်အနက်ရောင်ကောင်လေးသည် Vista ဖြစ်ပြီး၊ crusty old vet သည် Mac ဖြစ်သည်။ wow wow ဒါကကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ပြန်ဆွဲငင်အားအရှိဆုံးဖြစ်တယ်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 31
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 25
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 20
ဒီနည်းကိုငါမသိမီ - ငါကမက်ကိန်းကိုထောက်ခံသူမဟုတ်သလိုအိုဘားမားကိုထောက်ခံသူလည်းမဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက် - ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်၏အတည်ပြုချက်သည်လက်ရှိဘုရှ်၏အတည်ပြုချက်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်။ ကွန်ဂရက်တွင်အာဏာပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူများကခုန်ကျော်။ ခုန်ချနေကြစဉ်ဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ ဂျွန်ကယ်ရီသမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ဒီမိုကရက်တွေအိမ်ဖြူတော်မှာတောင်အခွင့်အရေးရနိုင်မလား။
လူတစ် ဦး သည်ကမ္ဘာ့အောက်ဖက်သို့ရောက်ရန်တာဝန်မရှိပါ။ သူသည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ဖြတ်သန်းသွားသောအရာအများစုသည်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတစ်ခုလုံး၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်အာဏာနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူများအပေါ်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခြင်းများနှင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်စပ်နေသည်။
နှစ်ဖက်စလုံးကပြောတာတွေကိုလူတွေကသဘောမတူရင်တောင် OpenMindedNut ကမှတ်ချက်ပေးတဲ့မူဝါဒကိုချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂါတစ် ဦး သည်သူအလိုရှိသမျှနှင့်ဆင်ဆာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သူပိုင်ဆိုင်သနည်း။
ဖေဖေ၊ ငါမနက်ဖြန်မှာအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်နေ့မှာမဲပေးနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကအမြဲစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ဒီသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ငါမဲပေးခွင့်ရခဲ့တယ်။ တကယ့်ကိုဆိုးဝါးပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှု Deficit Democracy စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း…သိုးငယ်တစ်ကောင်သည်သူတို့၏နောက် Sheppard တွင်အကြီးအကဲရွေးချယ်နေသည်ကိုမြင်တွေ့ရခြင်းကဝမ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသည်၊ အနီရောင်ဖြစ်စေ၊ အပြာရောင်ဖြစ်စေဖြစ်သည်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 47
သင်အမှတ်ပျောက်နေသည်။ OpenMindedNut သည်မည်သည့်ထင်မြင်ချက်မူဝါဒကိုမဆိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။ ငါသိထားသလောက်သူကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ ဒေါက်ဂလပ်သည်၎င်းကိုလုံးဝလွဲမှားစွာကောက်ယူခဲ့ပြီး၎င်းသည်သူ၏နိုင်ငံရေးယုံကြည်မှုများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်၎င်းကိုဖြိုခွဲရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒီ post မှာမမှန်ကန်တဲ့အရာမရှိဘူး။ OpenMindedNut က“ နု” တယ်၊ Douglass overracted နှင့်တစ် ဦး အထိခိုက်မခံလူတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ပယ်ဖျက်ရန်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါလား။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 57
ငါဘာကြောင့်သူ့ကိုနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်တွေနဲ့မတူဘူးလို့ပြောနေတာလဲ။ သူပြောခဲ့တာတွေကိုငါလုံးဝသဘောတူခဲ့တယ်! Oy ။ လုံလောက်ပြီ…ဆက်လုပ်ပါ
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 4, 46
Vista မှ XP သို့ပြောင်းခြင်းသည်အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ (ကောင်းပြီသော်လည်းထားပါ။ )
အလွန်အောင်မြင်သောလုပ်ငန်းရှင်များစွာနည်းတူဘားရတ်အိုဘားမားသည်စက္ကူပေါ်တွင်အိမ်တွင်းရိုက်ခတ်မှုကိုခံရနိုင်သည်ဟုမထင်ပါ။ သူ၌အတွေ့အကြုံမရှိသော်လည်းသူသည်ကောင်းမွန်သောအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်၊ စိတ်အေးအေးထားခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ယုတ္တိရှိသည့်အမြင်ရှိခြင်းနှင့်တူသည်။ AND, ထိုလူသည်သူသေဒဏ်စီရင်နိုင်သည်ပြသခဲ့သည်။
သူမကဲ့သို့ပင်အိုဘားမားတွင်ကြီးမားပြီးကြီးမားသောအစီအစဉ်နှင့်အမြင်ရှိခဲ့ပြီး ၂ နှစ်တာကာလအတွင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်နီးကပ်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အတွက်သေးငယ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အိုဘားမားသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိနိုင်ငံရေးရာထူးများအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုပြန်လည်တီထွင်ခဲ့သည်။ သူဟာအမှတ်တံဆိပ်အနေနဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုကျွန်တော်တသက်လုံးမြင်ဖူးသမျှအရာရာနဲ့တူအောင်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပြီး၊ အိုဘားမား၏အွန်လိုင်းမှတစ် ဦး ချင်းစီ၊ အသေးစားလှူဒါန်းသူများထံမှငွေအမြောက်အများကိုကောက်ယူနိုင်ခြင်းသည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ဒါကစစ်မှန်ခြင်းနှင့်မျှမ gimmick ဖြစ်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကအိုဘားမားသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၏တစ်ခုတည်းသောစူပါပါဝါသို့သွားခဲ့သည်။ သူကစွန့် ဦး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် VC ကုမ္ပဏီတွေဟာသူ့အချိန်ဇယားကိုရယူဖို့တောင်းပန်ကြမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့အများစုကသူ့ရဲ့ IPO ကိုမျှော်လင့်နေကြလိမ့်မည်။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 55
အိုဘားမား၏မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်လုံးဝလေးစားပြီးသူ၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းစွမ်းရည်အပေါ်အလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါသဘောတူတယ်၊ သူလိုပဲမဟုတ်လား၊ သူကဒီတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်တစ်ခုတည်းသောအချက်မှာသူသည်သူဘာလုပ်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တကယ်မသိသောကြောင့်အချို့သော levity (မကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်) ကိုချပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ သူဟာကတိတော်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ရွေးကောက်ပွဲ ၅ ခုမှာတစ်ခုစီမှာငါသမ္မတတစ် ဦး ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။
4:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 11, 49
အလွန်မိုက်မဲသောနှိုင်းယှဉ်ချက် - သင်၏ ၁၅ မိနစ်ကျော်ကျော်ကြာသောကျော်ကြားမှုမှ ၁၀ မိနစ်နုတ်ပါ။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 28
ဝမ်းနည်းပါတယ်၊ သင်ဤလှောင်ပြောင်မှုအားလုံးကိုသင်ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်စိုးရိမ်မိသလောက်ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်သင်နှင့် Bean Cup တွင်တွဲဆွဲခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
ငါ CNET ဖိုရမ်များမှမှတ်ချက်တစ်ခုဖယ်ရှားခံရပြီးတာနဲ့ငါထိရောက်သောမှတ်ချက်လုပ်ထင်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကအကြောင်းတော်တော်ရူးသွပ်ခဲ့တခါမှတ်မိသေးတယ်။ သို့သော်ထိုနေ့၏အဆုံးတွင်၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်မှတ်ချက်တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
သင်လုပ်နေတာကိုဆက်လုပ်ပါ ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမကြိုက်ဘူးဆိုရင်၊ ရှည်လျားသောဆိပ်ခံတံတားဖြင့်သူတို့လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 19
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Scott! ငါသည်သင်တို့ကိုဒီတစ်ခုပေါ်မှာငါနှင့်သင်၏ရှုထောင့်မျှဝေသင်အမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 37
ငါ့စကားလုံးကလူတွေအကြောင်းပြောတယ်။ Doug ငါသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုနှစ်သက်ပြီးသင်၏ Vista နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်လိမ္မာပါးနပ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ မှတ်ချက်တွေကိုဆင်ဆာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ Trish ကဒါကိုမကြိုက်ရင်သူမခြိမ်းခြောက်တာကိုလုပ်ပြီးသူမစာမဖတ်တော့ဘူးလို့အကြံပေးတယ်။ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်သူမပြန်လာရန်ကိုရပ်တန့်မရပါ
ကျွန်ုပ်သည်အိုဘားမားကိုထောက်ခံသူဖြစ်သော်လည်းသင်၏ဘလော့ဂ်ကိုကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ဖိုရမ်တွင်တင်သည့်အခါရယ်စရာကောင်းရုံသာမကအိုဘားမားအိမ်ဖြူတော်သို့ဝင်ပါကဖောင်းပွမှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မည်မဟုတ်ဟုမည်သူမျှငြင်း။ မရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးဘတ်စကက်ဘောကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောနိူင်ပါသည်။ မင်းကိုငါထပ်ခါတလဲလဲပြောနိူင်ပေမယ့် NBA တရားရုံးထဲကိုငါထွက်သွားပြီးတကယ်ကစားမလာရင်မင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။
အိုဘားမားကိုယ်တိုင်ပင်သူသည်ယခင်ကတစ်ခါမှမလုပ်ဆောင်ဖူးသည့်အဆင်သင့်ရှိမရှိနှင့် ၁၀၀% ကိုမသိနိုင်ဘဲအမှန်တကယ်အတွေ့အကြုံအနည်းငယ်သာရှိသည်မှာကြီးမားသောစွန့်စားမှုဖြစ်သည်။ အဲဒါကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့မထောက်ပံ့သင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။ မဟုတ်ပါ။ သံသယအရသူသည်သမ္မတကြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာလောင်းရန်သင်အားတောင်းဆိုလျှင်၎င်းသည်အခြားမေးခွန်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီအားလုံးတွင်ပြည်နယ်နှင့်ပါတီနိုင်ငံရေးကိုခွဲခြားထားခြင်းကြောင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကိစ္စရပ်များကိုဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲစေသည်။ အိုဘားမားသည်သူ၏အပြောအဆိုနှင့်အညီနေထိုင်နိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်နှလုံးသားဖြင့်မျှော်လင့်ပါသော်လည်းကျွန်ုပ်စိတ်ထဲသေချာပေါက်တစ်ခုမှာသူသည်ဘုရှ်သို့မဟုတ်မက်ကိန်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အလုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ "ပြောင်းလဲခြင်း" နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲအိုဘားမား၏လူမှုစီးပွားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်မူဝါဒတစ်ခုစီကိုဆန်းစစ်ပြီးနောက်ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါ့ထင်မြင်ချက် !! အားလုံး hatemail ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအီးမေးလ်ကိုညွှန်ကြားပါ ILoveFreedomOfSpeech@hotmail.com
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 2, 18
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အိုဘားမားကိုထောက်ခံအားပေးသူတစ်ယောက်ကရေးထားတာကိုအသိအမှတ်ပြုလိုက်တာကိုကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။ သူပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုရှုတ်ချဖို့ငါမကြိုးစားခဲ့ဘူး။
6:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 46
အိုဘားမားကိုသံသယဖြစ်စရာအကြောင်းအရင်းကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ပြီးသောစိတ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးနှင့်ကောင်းစွာစဉ်းစားထားသောမှတ်ချက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ အငြင်းအခုန်။ အမှန်တရားကတော့သူဘာလုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ ဒါကိုမြင်နိုင်ဖို့ကျန်နေသေးတယ်။ .. ငါယုံသည်။ Doug? s အမှတ်။ ဤဘလော့ဂ်ကိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိဖတ်ရှုနေသူမည်သူမဆို Doug တွင်ဟာသဉာဏ်ရှိကြောင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဝေးနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီဘာမှအကြောင်းကိုရယ်စရာအချိန်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်? သငျသညျဘဝနှင့်ခက်ခဲသောကြိမ်အကြောင်းရယ်မောမရနိုင်လျှင်, ငါအဘို့ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ ရယ်မောခြင်းကအရာအားလုံးကိုပိုကောင်းစေတယ်။ ရယ်မောခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဆေးဖြစ်သည်။ ငါတို့တစ်ခုခုရယ်ကြတာခ / c ပဲပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောရတယ်လို့ဆိုလိုတာလား နိုင်ငံရေးအရပြောဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောမတူသော်လည်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်း Doug နှင့် ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါသည်။ 🙂
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 02
အခြားသူများကိုဝေဖန်ခြင်းသည် (အိုဘားမားကို VISTA နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကမက်ကိန်းကိုအသုံးချနိုင်သောပြက်လုံးသာဖြစ်သည်) အခြားသူများကသင်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုရှိနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 23
ပို့စ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကရယ်စရာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ သင်၏စာဖတ်သူအချို့သည်အရူးများဖြစ်သည်။ ငါအရှုံးအဘို့အကူညီပေးဖို့, ဒီ site ကို RSS လိမ့်မယ်။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 11
ကြီးမားသောခြားနားချက်မှာမဲဆန္ဒရှင်များအား၎င်းတို့၏လက်ရှိဒေတာနှင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေရန်၊ အဆင့်မြှင့်ရန်ငွေများသုံးစွဲရန်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်ကိုလေ့လာရန်တောင်းခံခြင်းမခံရခြင်းဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ဟာပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသာပြောင်းလိုက်ရင်အခွန်ပြန်အမ်းငွေရမယ်လို့ကတိပေးထားတယ်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ် (သို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းပညာပံ့ပိုးသူ) မဆိုဤမျှကောင်းမွန်သင့်သည်။
သူ့ဘလော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်တုန်းကမှမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ မှတ်ချက်လည်းမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါ့ဘလော့ဂ်မှာဘယ်ရေးသားချက်တွေရှိနေတယ်၊ မင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့မင်းလိုငါပိုင်တယ်။ သင်အလိုရှိသည်အတိုင်းပြေးပါ။ ငါဖတ်ချင်တယ်၊ မဖတ်ချင်ဘူး၊ မင်းအခြားစာဖတ်သူတွေလိုပဲဖတ်မယ်။
4:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 20
ငါကဒီမှာပြက်ရယ် ... ငါကဘာလဲဆိုတာအဘို့အသဘောပေါက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်ဤအရာကိုစိတ်မ ၀ င်စားခဲ့သော်လည်း Vista အကြောင်းသင်ပြောဆိုနေခြင်းကြောင့် ပိုမို၍ !! ငါနိုင်ငံရေးပြက်လုံးများကိုယူနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်နည်းပညာပြက်လုံး? လာပါ! 😉
5:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 54
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်ငါဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ စာဖတ်သူချင်းကိုသူနင့် post ကိုနုလို့ခေါ်တာကြောင့်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းသည်ရယ်စရာဖြစ်သည်။
မင်းရာထူးကနေဘာမျှော်လင့်ခဲ့တာလဲ ဒီဟာက Mac vs. အေးဆေးနှင့်ရယ်စရာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေမှာ၎င်း၏တစ်ခုကြိုးပမ်းမှု။ Douglas လုပ်ဖို့အချိန်အလွန်မှားပါ။
ဤသည်မှာငါတို့နိုင်ငံ၏သမိုင်းတွင်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၃ လကဒေါ်လာသုံးထရီလီယံသည်အစုရှယ်ယာဈေးကွက်များမှထွက်ခဲ့သည်။ အလုပ်လက်မဲ့သည် ၁၀ နှစ်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်တွေ၊ အိမ်တွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဆုံးရှုံးနေကြတယ်။ ဘဏ်များနှင့်ဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများသည်ဒေဝါလီခံကြသည်။ တဖန်သင်တို့ဤပြက်လုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေဒီမှာထိုင်? ထိုအခါ unpatriotic သံသယနှင့်အတူကတက်လိုက်နာ?
အဓိကကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၏ VP တစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်တော်သည်သင့်ကိုဘယ်တော့မှငှားမည်မဟုတ်ပါ။
5:2008 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 18
ငါတခုတခုအပေါ်မှာ entry ကိုတင်ခဲ့သည် http://www.billkarr.com ။ မင်းဖတ်ချင်တာမင်းကြိုက်ရင်မင်းရဲ့ site ကိုဖတ်တဲ့သူတွေကိုပြောရင်အေးမယ်။
ဒါဟာ bummer မျိုးပါ၊ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်! ငါကျော်ရလိမ့်မယ် ငါပျော်နေတုန်းပဲ
5:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 42
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို (၂) နှစ်ကျော်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်လူနှစ်ယောက်သည်သင်၏နာမည်ကိုမည်သို့မှားယွင်းစေနိုင်သနည်း အဘယ်မှာရှိ hass everyoness ssensse ဟာသသွားပြီ?
5:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 9, 55
ခဏလေးမှဒီဘလော့ဂ်ကိုမသွားဘူး ထိုအရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်!? ငါအရမ်းအမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ပျက်တစ်ခါမျှ! ပြည်သူ့fကိုအေးဆေးတည်ငြိမ် !!
6:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 44
ဤအရာသည်ငါ Doug ၏ဘလော့ဂ်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်ဓာတ်ပုံဘလော့ဂ်အသစ်မှာအကူအညီရဖို့တကယ်လာခဲ့တာပါ။ ငါမြင်တဲ့အတိုင်းအခုအချိန်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောလိုက်တယ်။ ပထမအနေနဲ့ပါတီပွဲကိုငါမလိုက်ဘူးလို့လည်းပြောခွင့်ပြုပါ ငါမည်သည့်နိုင်ငံရေးကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျောထောက်နောက်ခံမ။ ငါသည် Dougs ၏အထက်လွှတ်တော်အမတ်အိုဘားမားနှင့်ဗစ်စတာကိုရည်ညွှန်းသည်။ လာမည့် ၄ နှစ်သည်ထိုရည်ညွှန်းချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထောက်ခံလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါလာမယ့်သမ္မတကြီးဖြစ်ကောင်းကြီးစွာသောကမ္ဘာစစ်ကတည်းက l သမ္မတနှင့်မဆိုသမ္မတ၏အပြည့်အစုံပန်းကန်ရှိလိမ့်မယ်။
ငါပို့စ်များစွာကိုဖတ်ပြီးဝေဖန်ရန်မဟုတ်ဘဲတစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့လိုသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အဟောင်းကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ LARGE ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၏ VP တာယာကသူသည် Doug ကိုငှားရမ်းခြင်းမပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤဖော်ပြချက်သည်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ကာလတစ်ခုလုံးကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည် - ——“ ငါယေရှုကိုငါရှာ၏” အဖြေ၊ သူသည်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။
Tanya ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Doug အလုပ်လျှောက်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
နိဂုံးချုပ်တွင်လူများကိုထွန်းလင်းပါ။ လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကအထောက်အကူပြုသင့်သဖြင့်ဘဝသည်ယနေ့အချိန်တွင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ဘ ၀ ဟာတိုတောင်းတယ်။
6:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 44
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်ကိုလက်ခံဖို့ဖိတ်ကြားတာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်။ Barack ကမင်းရဲ့သမ္မတဖြစ်မယ်လို့ကတိပေးခဲ့တယ်။ ခင်ဗျားဟာစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ၊ GW Bush သည်မည်သည့်ဒီမိုကရေစီနည်းထက်မဆိုပိုမိုသုံးစွဲခဲ့ပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုနားလည်ပါသည်။
အိုဘားမားအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်သည်သူရရှိခဲ့သောထောက်ခံမှုနှင့်မဲပေါင်း ၆၄ သန်းအတွက်အစောပိုင်းသတိပေးလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ငါပိုပြီးပွင့်လင်းစိတ်သဘောထားဖြစ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဤမျှလောက်များစွာသောရီပတ်ဘလီကန်နှင့်ကွန်ဆာဗေးတစ် Barack ဘို့မဲပေးသောကြောင့်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်လည်းသင်လုပ်နိုင်သည်။
6:2008 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 09
ငါရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆက်တွဲရှိသည် အိုဘားမားရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရအပေါ် post ကြောင်းရုံကဖော်ပြသည်။ သူကကျွန်တော့်ကိုထောက်ခံတယ်၊ ဒီတိုင်းပြည်ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရောက်အောင်ငါအရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ post ကိုဖတ်ပါ။ အများကြီးလေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်း,